Ciidamada ammaanka oo qabtay nin weerar gaystay oo rasaas kasoo riday guri shacab – Radio Daljir
Ciidamada ammaanka oo qabtay nin weerar gaystay oo rasaas kasoo riday guri shacab
Abriil 17, 2019 6:51 b 0
Ciidamada ammaanka ee dowladda faderaalka Soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay nin ku eedaysan inuu weerar u gaystay saldhig ciidamada booliska ay joogeen oo ku yaala degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir.
Ninkan ayaa dhaawac u gaystay afar ka mid ah ciidamada booliska ee saldhigga Wardhiigley, waxaana uu ku cararay gurri dad shacab ay deganaayeen.
Rasaas ayay ciidamada ammaanka iyo ninkan hubaysan iswaydaarsadeen, isagoo rasaasta kasoo ridayaya guriga uu ku dhuuntay, waxaana markii dambe laga toogtay lugta isagoo dhaawac ahaan loo soo qabtay.
“Waxaan u mahadcelinayaa Shacabka Degmada Warta-Nabadda oo Booliiska farta ugu fiiqay shakhsi bam gacmeed tuuray, kadibna gurigii uu galay looga dabategey ciidankuna ay gacanta ku soo dhigeen. Al-shabaab ha ogaato in bulshadu go’aansatay meel in looga soo wadajeesto danbiile walba ” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir oo intaasi ku daray inay Al-shabaab uga dabatagayaan meel walba oo ay galaan.